Babal’inni dhibee heeppiitaaytas bal’aa ta’uu isaatin ummanni of eeggannaa taasisuu qaba jedhame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Babal’inni dhibee heeppiitaaytas bal’aa ta’uu isaatin ummanni of eeggannaa taasisuu qaba jedhame
On Jul 28, 2020 54
Finfinnee, Adoolessa 21, 2012 (FBC) – Babal’inni dhibee heeppiitaaytas (dhibee tiruu) bal’aa ta’uu isaatin ummanni of eeggannaa taasisu cimsuu qaba jedhe Ministeerri Fayyaa FDRI.
Ministir deettaan ministeerichaa Dooktar Darajjee Dhugumaan har’a guyyaan heeppitaaytasii addunyaa yoo kabajamu akka beeksisanitti, dhibichi dhibeewwan hamoo ajjeestuu ta’an keessaa addunyaarraa sadarkaa lammaffaarratti argama.
Mootummaan xiyyeeffannaadhan irratti hojjechaa jiraachuu eeruun, barana ogeeyyii fayyaa saaxilamoo ta’an kuma dhibba 6 kuma 75 oliif talaalliin laatamuu eeran.
Bara Faranjootaa 2007rraa eegalee idileedhan akka talaalliitti daa’immaniif laatamaa jiraachuu eeran.
Guyyichi akka addunyaatti yeroo 10ffaaf, akka Ityoophiyaatti ammoo si’a 7ffaaf kabajameera.
Addunyaarratti waggaa waggaadhan namoonni miiliyoonni 1.3 dhibee heeppitaaytasiin lubbuu isaanii ni dhabu.
Ityoophiyaan dhibichi kan itti babal’ate keessatti kan ramadamte yoo ta’u, bara Faranjootaa 2017 qorannaa hojjetameen namoonni %9.4 heeppitaaytas B, %3.1 ammoo heeppitaaytas C kan qaban ta’uun ibsameera.
Oromiyaatti namoonni dabalataa 78 vaayrasii Koroonaan qabamuu ibsame
Wiirtuun Barnootaa fi Odeeffannoo Kalaqa Fayyaa Diijjiitaalaa ebbifame
Ameerikaan meeshaalee hargansuu (Veentileetara) 250 Ityoophiyaaf laatte
Haadholin vaayrasii koroonaan yoo qabamaniyyu daa’imasaanii harma hoosisuu qabu- DhFA
Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa dhimmota tibbana naannichatti…
Indiyaatti xiyyaarri Booying 737 kufee lamatti cabe namootni…
Beenishaanguul Guumzitti walitti bu’iinsa uumuuf kan…
Oromiyaatti namoonni dabalataa 78 vaayrasii Koroonaan…
Wiirtuun Barnootaa fi Odeeffannoo Kalaqa Fayyaa…
Ameerikaan meeshaalee hargansuu (Veentileetara) 250…
Oduu biyya keessaa2344